रक्सी र गर्मीले पनि जन्डिस हुन्छ « Sadhana
रक्सी र गर्मीले पनि जन्डिस हुन्छ
डा रामदेव पंडित (आयुर्वेद चिकित्सक)
रक्सी धेरै खाँदा जन्डिस
कालिकोट घर भई भारी बोक्ने पेसामा संलग्न ४५ वर्षीय चन्द्र परियार दिनहुँनै २५० मि.लि. जति रक्सी पिउने गर्थे । विगत १५ दिनदेखि उनलाई थकाइ धरै लाग्ने, भोक नलाग्ने, शरीरको तौल घट्दै जाने, वाकवाक लाग्ने, पेट दुख्ने भएको गुनासो लिएर आयुर्वेद अस्पताल, नरदेवी पुगे ।
चन्द्र परियारमा लामो समयदेखि रक्सी सेवनले कलेजोको कार्यशैली बिग्रिएर (अल्कोहल इन्डयुस्ड लिभर डिजिज) जन्डिस भएको थाहा भयो । कलेजोको रोगको कारण उनमा जन्डिस देखिएको हो ।
गर्मी मौसममा स्वास्थ्यसम्बन्धी संक्रमण धेरै देखिने गर्छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदँषणले गर्दा पहाडी भँभागमा समेत गर्मी ठाउँमा हुने समस्या बढ्दै गएका छन् । हाल तापक्रम वृद्धिसँगै अस्पतालहरूमा कामला (जन्डिस) का बिरामीको संख्या
बढिरहेको छ ।
सरसफाइको कमीले जन्डिस
मोरङको पथरीबाट काठमाडौँमा लोकसेवाको तयारी गर्न बसेका २४ वर्षीय विकास आचार्य समय जोगाउन सधैँ होटलमा खाना खान्थे । ३ दिनदेखि पिसाब पहेँलो हुँदै गयो, आँखा पहेँलो भएर आयो, भोक लाग्न छोड्यो भन्दै उनी आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी पुगे । जाँचपछि उनलाई हेपाटाइटिस ‘ई’को कारण जन्डिस भएको देखियो । सरसफाइको कमीले दिसा–पिसाबको माध्यमबाट संक्रमण भएर उनलाई यो समस्या आएको थाहा भयो । हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ भनेको एक किसिमको भाइरस हो । यो बाहिरको संक्रमित खाना र पानीको माध्यमबाट सर्छ ।
गर्मीका कारण जन्डिस
यस्तै महोत्तरीको पिपराबाट आई काठमाडौं, कालीमाटीमा तरकारी बेच्ने ४० वर्षीय जीवच्छ यादव दिनको १२ कप चिया पिउँथे । उनको खाना खाने कुनै टुंगो हुँदो रहेनछ । ३ दिनदेखि जीउ भारी हुने, दिसा कालो–कालो आउने, शरीरको तापक्रम बढ्ने, जीउ गल्ने र वाकवाक लाग्ने हुन थालेपछि नजिकैको औषधि पसलबाट सिटामेल लिएर खाए । त्यसपछि आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर पुगे ।
जीवच्छ यादवलाई कुनै संक्रमण नभएर कलेजोमा तनाव र दबाब परेर एवं शरीरमा अत्यधिक ताप वृद्धि भएर एनामिया (पाण्डु) भई जन्डिस भएको थाहा भयो । यो गलत जीवनशैलीको कारण देखिएको जन्डिस हो ।
गर्भवती र शिशुलाई हुने जन्डिस
बालाजु घर भएकी ३३ वर्षीया अम्बिका तामाङ ३ महिनादेखी गर्भवती छिन् । २ दिनदेखि उनलाई खान मन लागिरहेको छैन, पिसाब पहेँलो गइरहेको छ, आँखा र नङ पनि पहेँलो भएर आएको छ भन्दै उनी शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका स्त्री तथा प्रसुति विभाग पुगिन् ।
अम्बिका तामाङमा संक्रमणको कारण प्रिग्नेन्सी इन्डयुस्ड इक्टेरस भएको हो । यो सामान्यता संक्रमणलगायत अन्य शारीरिक जैव रासायनिक क्रिया तथा प्रतिक्रियाले हुने हुन्छ ।
यसै गरी कास्की पोखरा घर भई काठमाडौंमा सरकारी जागिरे ३१ वर्षीया गोमा विष्ट सुत्केरी भएको ५ दिन भयो । उनको नवजात छोराको छाला अत्यधिक पहेँलो भएकोले उनी चिन्तित हुँदै कान्ति बालअस्पताल, महाराजगन्ज पुगिन् ।
हेमोलाइसिस भएर गोमा विष्टको छोरालाई जन्डिस देखियो । यो जन्डिस आबिसी टुक्रिएर हुने गर्छ । यो नियोनेटल जन्डिस सामान्यतः १५ दिनसम्ममा स्वतः हराएर जाने हुन्छ । सानो बच्चाको जन्डिस बिहानको घाममा राखेर र फोटोथेरापीमा सेकाएपछि निको हुन्छ ।
नवजात शिशुमा बच्चामा एन्जाइमसको कमीले गर्दा पनि जन्डिस देखिन सक्छ । यस्तो खालको जन्डिस लामो समयसम्म रहिरहन्छ र नर्मल जन्डिसभन्दा फरक खालको हुन्छ । रगत जाँच र भिडियो एक्सरे गरेपछि कुन खालको जन्डिस हो भन्ने पत्ता लाग्छ । एन्जाइमको कमीले गर्दा हुने भनेको जिसिपिडी डेफिसेन्सी हो । यो छोरा शिशुहरुमा बढी देखिन्छ । यो नवजात शिशुदेखि ३÷४ वर्षको उमेरका बच्चामा देखिन्छ । नवजात शिशुमा थाइराइड हर्मोनको कमी भयो भने जन्डिस देखा पर्छ ।
डाक्टरकै कारण बिरामीलाई दुःख
जन्डिसबारे ऐलोपेथी डाक्टरहरुमा अधुरो र एकोहोरो धारणा छ । जन्डिस किन हुन्छ ? देखि यो कसरी निको हुन्छ ? भन्नेबारे त्यही एकोहोरो धारणाले बिरामीले दुःख पाइरहेका छन् । खासमा जन्डिस लक्षण मात्र होइन, रोग पनि हो । पेट दुख्नु, ज्वरो आउनु भनेजस्तै जन्डिस पनि विभिन्न रोगमा देख्न सकिने लक्षण हो । साथै स्वतन्त्ररुपमा उत्पन्न हुन सक्ने रोग पनि हो । जन्डिस सामान्य लक्षण होइन, यसको सही तरिकाले उपचार गरिएन भने यो प्राणघातक पनि हुनसक्छ ।
जन्डिस स्वतन्त्ररुपमा पनि देखा पर्छ र अन्य रोगको लक्षणको रुपमा पनि देखिन्छ । जन्डिसबारे ऐलोपेथी डाक्टरहरु भन्छन्, ‘जन्डिसको कुनै उपचार हुँदैन, किनकि यो रोग होइन, यसको उपचार नै गर्ने होइन ।’ यो धारणा ठीक होइन । अतः जन्डिस जुन रोगको उपज हो, त्यस रोगको कारणलाई उपचार गर्नु जति जरुरी हुन्छ त्यति नै अनिवार्य स्वतन्त्र जन्डिसको उपचार गर्नु पनि हुन्छ ।
के हो त जन्डिस ?
ऐलोपेथी चिकित्सा पद्धतिअनुसार जन्डिस भनेको रगतमा बिलिरुबिन नामक जैवतत्व थुप्रिएर तन्तुहरुमा हुने एककिसिमको रङकोे परिवर्तन हो, जसमा तन्तुहरुको रङ पहेँलो हुँदै जान्छ । जब रगतमा हाइपर बिलिरुबेमिया भन्ने तत्वको मात्रा बढी हुन जान्छ त्यसपछि तन्तुहरुको रङ पहेँलो हुन थाल्छ । सामान्यतः मानव शरीरमा बिलिरूबिनको मात्रा १ एम.जी. प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । जब यो बढ्दै जान्छ तब यसलाई जन्डिस भनिन्छ ।शरीरमा केही अंग विशेषको रोग शुरु हुन खोज्दा जन्डिस देखिन्छ ।
कलेजो रोगमा र कहिलेकाहीँ हेमोलाइटिक डिसअडरमा जन्डिस लक्षणको रुपमा देखिन्छ । अतः आधुनिक चिकित्सा विज्ञानअनुसार जन्डिस लक्षण मात्र मानिन्छ ।
आयुर्वेदको विभिन्न संहिताहरुमा जस्तै– चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हारित संहिता, माधव निदान एवम् अष्टांग संग्रह/हृदयमा जन्डिसको विस्तृत वर्णन पाइन्छ । चरकले पाण्डु (एनामिया) को प्रवर्धमानावस्था मानेका छन्, सुश्रुतले पाण्डुलगायत अन्य रोगको उपद्रव मानेका छन्, वाग्वटले पाण्डुद्वारा उत्पन्न हुने रोग र हारितले पाण्डुको विशेष रुपलाई जन्डिस भनेका छन् । यसरी आयुर्वेद संहिता र संहिताकारहरुको जन्डिसप्रतिको बुझाइ फरक–फरक रहेको देखिन्छ । कसैले यसलाई रोगको रुपमा, कसैले अवस्थाका रुपमा, कसैले विशेष रुपको रुपमा, कसैले उपद्रवको रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अतः आयुर्वेदानुसार जन्डिस रोग पनि हो र रोगको लक्षण पनि हो ।
महर्षि चरकका अनुसार जन्डिसको उत्पत्ति मुख्यतः पित्त वृद्धि एवम् पित्तवर्धक आहारको अत्यधिक सेवनले शरीरमा बन्नेवाला रक्तगत पित्तको मात्रा बढ्नाले हुन्छ । साथै पाण्डु रोगले पनि जन्डिस निम्त्याउँछ । मुख्यतः जन्डिस स्वतन्त्र एवं परतन्त्र दुई प्रकारका छन् ।
आधुनिक चिकित्सानुसार, रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्न गई छाला र आँखा पहेँलो हुन्छ । कहिलेकाहीँ रगतमा संक्रमण (सेफ्सिस), मुटुको रोग, कलेजोमा रगतको अभाव, क्षयरोगको औषधि सेवन, आदि कारणले पनि जन्डिस हुन्छ । जन्डिसको केन्द्र कलेजो हो ।
रोग यकिन भएपछि कमलपित्त वा हेपाटाइटिसको आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्न सकिन्छ । चिकित्सकले निम्नबमोजित औषधि दिन सक्छन् । व्यक्तिअनुसार मात्रा फरक हुनसक्ने भएकाले चिकित्सको सल्लाहपछि मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
सम्भाव्य औषधिहरु :
निशोथचुर्ण, कुटकीचुर्ण, त्रिफला अथवा राजवृक्षको प्रयोगद्धारा विरेचन गराउनुपर्छ ।
अथवा त्रिफलाको काढा ३० मि.लि.को मात्रामा बिहान–बेलुका खान दिनुपर्छ ।
नवायसलौह ३ सय मि.लि. ग्रामको मात्रामा दिनको दुईपटक महसँग खान दिनुपर्छ ।
पुनर्नवा, अमृता, कालमेघ, कुटकी, भुइँ अमला आदि जडीबुटीको मिश्रण दिनुपर्छ ।
जन्डिस हुँदा चिकित्सको सल्लाहपछि खान हुने वस्तुहरु :
पेयपदार्थहरू : पानी, ग्लुकोज पानी, मिश्री पानी प्रशस्त मात्रामा खाने । उखु, मौसम, सुन्तला आदिको जुस खाने ।
फलफँलहरू: उखु, मेवा, स्याउ, सुन्तला, नासपाती, कलिलो काँक्रो, नरिवलको पानी, खरबुजा, तरबुजा, गाजर, मुला, प्रशस्त खाने ।
मसलाहरू: सिधेनँन, जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुन, प्याज, बेसार, जन्डिस कम हुँदै गएको अवस्थामा मात्र थोरै खान सकिन्छ ।
सब्जीहरू: रायोको साग, काउली, बन्दा, फर्सीको मुन्टा, सिमी, तितेकरेला, लौका, स्कुस, आलु, च्याउ, फर्सी, हरियो र पाकेको चम्सुर, पालुंगो, मेथीको साग, सिधेनँन, जिरा हालेर उसिनेको तरकारी खान हुन्छ । जीउ चिलाउन थालेमा भने नँन नखानु राम्रो हुन्छ ।
रहरको दाल, मुँगको दाल, पाउरोटी (क्रिम नभएको), बिस्कुट, दँध डेरीको मात्र खानुपर्छ ।
जन्डिस भएको अवस्थामा जति सक्यो आराम गर्नुपर्छ ।
खान नहुने कुराहरू (चिकित्सको सल्लाहपछि मात्र)
सब्जीहरू : तोरीको साग, सुपको साग आदि ।
फलफुलहरु : आँप, केरा, अंगुर, लिची, अनार, अम्बा आदि ।
मसलाहरू : चिल्लो पदार्थ, खुर्सानी, काजु, बदाम, छोकडा, तिल आदि ।
पेयपदार्थहरू :दही, मही, फ्रिजमा राखेको कोक, फेन्टा, पेप्सीलगायतका चिसो पेय तथा चिया, कफी एवम् अत्कोहलजन्य पेयपदार्थ आदि ।
चाउचाउ, केक, पप, मिठाईहरू, भटमास, चना, बोडी, अण्डा, माछा, मासु, चिल्लो, पिरो अमिलो, मासको दाल, मसुरो, विपरीत लिंगीसँग नसुत्ने अर्थात् एक्लै सुत्ने । जन्डिस हुँदा ज्वरो आएमा सिटामोल खानुहुँदैन ।
जन्डिस भएको कसरी थाहा हुन्छ ?
जन्डिस भएको दुई तरिकाले थाहा हुन्छ ।
दर्शन विधि : आँखाको सेतो भाग पहेँलो भयो भने जन्डिस भएको हुनसक्छ ।
परीक्षण विधि : रगत जाँचेर पनि जन्डिस भए/नभएको पत्ता लाग्छ । सामान्यत रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा २.५ एम.जी. प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसलाई जन्डिस मानिन्छ । आँखामा पहेँलो देखिन कम्तीमा पनि दुईभन्दा माथि बिलिरूबिन हुनुपर्छ । यो तीनभन्दा माथि भयो भने राम्रोसँग देखिन्छ । बिलिरूबिन दुईभन्दा तल हुँदा पनि जन्डिस हुन्छ तर
बाहिर देखिँदैन ।
जन्डिसमा परहेज विवाद
जन्डिस आफैं निको हुन्छ या जन्डिसमा मुख बार्नु भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँध्नुजस्तै हो भन्ने भ्रम ऐलोपेथी डाक्टरहरुले फैलाइरहेका छन् । जन्डिसमा कुनै पनि खाना नखाने भन्ने हुँदैन भन्ने उनीहरुको मान्यता छ । होला अब्सट्रक्टिभ जन्डिसमा खानाको परहेजले सुधार नदेखिएला तर सबै प्रकारको जन्डिसमा त्यस्तो हुँदैन । आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानका अनुसार खानेकुराले पनि जन्डिसलाई सीधा असर पार्छ । खानाको परहेजको अभ्यासबाट मात्र पनि बिरामीलाई सहज भएको र छिटो निको भएको पाइएको छ । जन्डिस भएको बिरामीलाई सुपाच्य खाना दिँदा फाइदा गर्छ ।
एक वर्ष नाघेका बच्चालाई हेपाटाइटिस ‘ए’ विरुद्धको खोप पनि लगाउँदा हेपाटाइटिस ‘ए’को कारणले हुने जन्डिसबाट बच्न सकिन्छ । हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ जन्डिस कलेजो सुन्निएपछि देखिने गर्छ । एक/दुई वर्षमा दुई/तीनपटक जन्डिस भयो भने युलसन डिजिजको कारणले हुनसक्छ । युलसन डिजिज भयो भने कहिलेकाहीँ पटकपटक जन्डिस हुने गर्छ । कलेजो सुन्निदै गयो भने युलसन डिजिजमा कलेजो
फेर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
हेपाटाइटिस ‘बी’ सर्नाले पनि जन्डिस देखिन सक्छ । अहिले हेपाटाइटिसविरुद्धको खोप आइसकेकाले पहिलाजस्तोे सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । आमालाई हेपाटाइटिस ‘बी’ भएको छ भने बच्चालाई जन्मिएको ७२ घन्टाभित्र हेपाटाइटिस ‘बी’ र इमिनोगोलोबिन खोप लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा बच्चामा सर्न पाउँदैन ।
हेपाटाइटिस ‘सी’ले गर्दा पनि जन्डिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो समस्या रगतसँग सम्बन्धित समस्या हुने बच्चामा धेरै देखिने गर्छ । जस्तै : सिकलसेल थाइलेसिमिया भएका बच्चालाई रगत दिनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हेपाटाइटिस ‘सी’ सर्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रिलबर्ट सिन्ड्रोमको कारणले मात्र जन्डिसको मात्रा देखिन्छ । जन्डिस लक्षण पनि हो, रोग पनि हो । यसको सही तरिकाले उपचार गरिएन भने यो प्राणघातक पनि साबित हुनसक्छ ।
जन्डिस वा हेपाटाइटिसको लक्षण
छाला, पिसाब र आँखाको रंग बढी पहेँलो हुन्छ ।
खान नरुच्ने, वाकवाकी लाग्ने हुन्छ ।
शरीरमा बढी कमजोरी हुन्छ ।
चिल्लो कुरा खाँदा नपच्ने हुन्छ ।
सबै जीउ चिलाउने हुन्छ ।
जन्डिसको कारणलाई ३ तरिकाले बुझ्न सकिन्छ
कलेजोपँर्व हुने रोगहरु
यसमा रगत कलेजोमा आइपुग्नुअघि नै रक्तकोषिका नष्ट हुन गई रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्छ । जस्तै– मलेरिया आदि ।
कलेजोमा हुने रोगहरु
कलेजोको अक्षमताले गर्दा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्छ । जस्तै– हेपाटाइटिस (संक्रमण तथा अन्य कारणले गर्दा कलेजो सुन्निने रोग), सिरोसिस, अर्बुद आदि ।
कलेजोपश्चात् हुने रोगहरु
कलेजोबाट पित्तलालाई लैजाने नली तथा थैलीमा हुने रोगहरु जस्तै– पित्तथैली तथा नलीमा ढुंगा, पित्त थैलीको संक्रमण आदि ।